यी महिनामा जन्मिने युवती साक्षात लक्ष्मीको स्वरुप, जन्नुहोस कतै तपाईं त पर्नुभएन ? – Ramailo Sandesh
हिन्दू धर्ममा कन्यालाई माताको स्वरुप मानिने गरिन्छ। नवरात्रीमा ९ कन्यालाई खाना खुवाउने प्रचलन पनि छ। यसो गर्दा दुर्गा माता प्रसन्न हुने धार्मिक विश्वास छ।प्रचानि शास्त्रमा पनि कन्यालाई पुजनिय मानिएको थियो। जब कसैको घरमा छोरीको जन्म हुन्छ, तब मानिस आफ्नो घरमा लक्ष्मी आएको बताउँछन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही महिना यस्ता हुन्छन्, जुन महिनामा जन्मिने युवती निकै भाग्यमानि हुने गर्दछन्। जो साक्षत लक्ष्मीको स्वरुप समान हुने गर्दछन्।यस महिनामा जन्मिने युवती आफ्नो साथमा सुख समृद्धि लिएर आउने गर्दछन्। उनीहरु विवाह गरेर पतिको घरमा जाँदा पनि त्यहाँ सुख, समृद्धि लिएर पुग्ने गर्दछन्।आउनुहोस् जानौँ कुन-कुन हुन् ती महिना ?
फेब्रुअरी:फेब्रुअरी महिनामा जुन युवतीको जन्म हुन्छ, उनीहरु निकै बिनम्र हुने गर्दछन्। यस महिनामा जन्मिने युवती निकै वुद्धिमान मानिन्छन्।यिनीहरुलाई विवाहका लागि राम्रो घर मिल्ने गर्दछ। यी युवतीले जन्मसँग घरमा सुख र समृद्धि लिएर आउने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यिनीहरुको ग्रह नक्षत्रको चालले यिनीहरुलाई फाइदा पुर्याउने गर्दछ।
अप्रिल:अप्रिल महिनामा जन्मिने युवती निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। शास्त्रका अनुसार पनि यो महिनालाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ। यो महिनामा जन्मिने युवतीको ग्रहको चाल निकै तेज हुने गर्दछ। जसका कारण यिनीहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने गर्दछ।
जुन:जुन महिनामा जन्मिने युवती पनि निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। यिनीहरु सफलताका लागि कडा मेहनत गर्न सक्षम हुने गर्दछन्। यस महिनामा जन्मिने युवतलाई साक्षात लक्ष्मीको स्वरुप मानिने गरिन्छ।यस महिनामा जन्मिने युवती आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हर प्रयास गर्ने र सफलता हाँसिल गरेरै छोड्ने गर्दछन्।
सेप्टेम्बर:सेप्टेम्बर महिनामा जन्मिने युवतीको कुण्डलीमा चन्द्र, बुध र शुक्र तीन ग्रहको मिलन हुने गर्दछ। जसका कारण यिनीहरु निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। साथसाथै धनवान पनि हुने गर्दछ।
यस महिनामा जन्मिने युवतीले आफ्नो जीवनमा सबै थोक प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यिनीहरुलाई कहिलै कुनै चीजको कमी हुँदैन्। यस महिनामा जन्मिने युवतीको विवाह पनि राम्रो र धनी परिवारमा हुने गर्दछ।